U Wai Yan Min | Dedaa.com.mm
U Wai Yan Min
Why we need management?
ယနေ့ခေတ် စီမံခန့်ခွဲမှု့ ( Management ) နဲ့ ပက်သက်ပြီး Manager တွေ ၊ စီမံခန့်ခွဲသူတွေ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကို အခုဒီ နှစ်မိနစ် (2Minutes ) စာ Video အတွင်းမှာ ဆရာ ဦးဝေယံဝင်း မှ Dedaa မှတစ်ဆင့် အခုလို ပြောကြားပေးထားပါတယ် ။
လူတိုင်း ၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှု့ ဘာကြောင့် လိုအပ်သလဲ ဆိုတာကို အခုဒီ သုံးမိနစ် (3Minutes ) စာ Video အတွင်းမှာ ဆရာ ဦးဝေယံဝင်း မှ Dedaa မှတစ်ဆင့် အခုလို ပြောကြားပေးထားပါတယ် ။
ယခု Dedaa ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနေသူများထဲတွင် Business Format (စီးပွားရေး/လုပ်ငန်းစနစ်ကျနမှု) လိုအပ်နေသည့် SMEလုပ်ငန်းရှင်များ၊ Start-upလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ အိမ်တွင်းစီးပွားရေး (သို့)တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးတစ်ခုခုလုပ်ကိုင်နေကြသူများ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများပါဝင်ပါသလား?
Dedaa မှအဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါ၍စိတ်ပါဝင်